Firefox 89 waxay la timid isbeddelo is-beddel ah, kalkuleytar ku yaal barta cinwaanka iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Firefox 89 waxay la timid isbeddelo is-beddel ah, kalkuleytar ku yaal barta cinwaanka iyo in ka badan
Dhowr maalmood ka hor ayaa la sii daayay Firefox 89 sii-deynta iyo qaabkan cusub isbeddelada ugu muhiimsan ee muuqda waa cusbooneysiinta xiriirka, Sawirada sawir-gacmeedka 'Icon pictogram' ayaa la cusbooneysiiyay, qaabka walxaha kala duwan ayaa loo mideeyay iyo midabka midabka ayaa dib loo naqshadeeyay.
Intaa waxaa dheer, Qaabdhismeedka bar tab ayaa loo beddelay- Geesaha badhamada tabta waa la soo koobay oo imika ha ku milmayn gudida dhinaca hoose ee hoose (saamaynta badhanka sabaynaysa). Waxaa laga saaray kala soocii muuqaalka ahaa ee 'tabs' aan firfircooneyn, laakiin aagga uu badhanku daggan yahay ayaa la iftiimiyay markii tilmaamuhu dul wareegayo tabka.
Sidoo kale menu ayaa dib loo habeeyayDhexdeeda, waxyaabo yar oo la isticmaalay iyo kuwo duugoobay ayaa laga saaray menu-ka weyn iyo menusyada macnaha guud si loo xoojiyo astaamaha ugu muhiimsan. Waxyaabaha haray ayaa dib loo habeeyay iyadoo lagu saleynayo muhiimadda iyo ku xirnaanta adeegsadayaasha.
Iyada oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah carqaladeynta jahwareerka muuqaalka, astaamo ku xigta walxaha menu ayaa laga saaray oo kaliya waxaa ku haray sumadaha qoraalka. Isku xirnaanta qaabeynta guddiga iyo qalabka soo-saareyaasha websaydhka waxay ku yaalliin qayb gaar ah oo ah "Qalab dheeri ah". Si aad ugu noqotid muuqaalkii hore ee ku saabsan: config, waxaad dejin kartaa halbeegga "browser.proton.enabled" illaa "been".
Isbeddelada kale ee taagan ayaa ah in tirada cunsuriyada ee mashquuliya dareenka isticmaalaha la yareeyay. Digniino iyo ogeysiisyo aan loo baahnayn ayaa laga saaray.
Sidoo kale waxaan ogaan karnaa in kalkuleytar uu ku dhexjiro barta cinwaanka. Kalkuleytarku wali naafo ayuu u yahay wuxuuna ubaahanyahay inuu bedelo soojeedinta soo jeedinta.
Nooca Linux, isticmaalka mashiinka ka kooban WebRender ayaa loo oggolaaday dhammaan isticmaaleyaasha Linux, oo ay ku jiraan deegaan kasta oo desktop ah, dhammaan noocyada Mesa iyo nidaamyada wadayaasha NVIDIA (Markii hore, webRender waxaa kaliya loogu talagalay GNOME, KDE, iyo Xfce oo ay la socdaan darawallada Intel iyo AMD.)
In hab dhirta gaarka loo leeyahay, habka dhirta Wadarta Ilaalinta cookie-ku waa la awoodi karaa taas oo markii hore kici jirtay oo keliya markii la xushay qaabka xannibista spam ee adag.
Nooca labaad ee habka SmartBlock ayaa lagu daray, oo loogu talagalay in lagu xaliyo dhibaatooyinka bogagga ka dhasha xannibaadda qoraallada dibedda ee habka daalacashada gaarka ah ama iyadoo la dhaqaajinayo xannibaadda kor loo qaaday ee waxyaabaha aan loo baahnayn. Gaar ahaan, SmartBlock wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si weyn u kordhiso waxqabadka goobaha qaarkood oo gaabis ah sababtoo ah awood la'aanta in lagu raro lambarka qoraalka si loola socdo.
Ugu dambeyntii waxaa sidoo kale la iftiimiyay in hirgelinta dhinac saddexaad ayaa la soo bandhigay (uusan ku dhalan nidaamka) ee walxaha foomka gelinta, sida badhannada raadiyaha, badhamada, liistada hoos-u-dhigga iyo aagagga wax lagu qoro ee qoraalka ah (gelinta, textarea, badhanka, xulo), oo leh naqshad casri ah. Adeegsiga fulin gooni ah oo ka kooban walxaha foomka ayaa waliba saameyn togan ku yeeshay waxqabadka bogga.
Sidee loo rakibaa nooca cusub ee Firefox 89 ee Linux?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox 89 waxay la timid isbeddelo is-beddel ah, kalkuleytar ku yaal barta cinwaanka iyo in ka badan
Waan jeclahay taas hadda way fududahay in la garto tabta firfircoon, laakiin ma ahan in qaabka is haysta la iska daayo, waxaan badanaa adeegsadaa biraawsarka shaashad buuxda, marka ma arko dhumucda baarka, laakiin markaan u baahdo inaan ku isticmaalo daaqadda hab cabirka xoogaa i dhibaysa.
Ku jawaab LeoAmez
Mashruuca XFCE: U guur Wax ku biirintaada Maaliyadeed ee ku biirista OpenCollective